Benefits of Vitamin C – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သွခရြလောကျသော ဗီတာမငျစီရဲ့ အာနိသငျမြား
ဗီတာမငျစီဆိုတာ လူတှအေတှကျမရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ဗီတာမငျတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျကနေ ဗီတာမငျစီကိုမထုတျလုပျနိုငျတာကွောငျ့ အစားအစာမှလိုအပျတဲ့ဗီတာမငျစီကိုယူရပါတယျ။ ဗီတာမငျစီဟာ တဈသှူးမြားကိုပွုပွငျခွငျး၊အာရုံကွောထုတျလှတျမှုစနဈတှငျပါဝငျခွငျး၊ခန်ဓာကိုယျအငျဇိုငျးမြားရဲ့ လုပျငနျးဆောငျတာမြားတှငျကူညီဆောငျရှကျခွငျးနဲ့ ကိုယျခံစှမျးအားစနဈကိုကောငျးမှနျစခွေငျးအပွငျ ဓါတျတိုးဆနျ့ကငျြသတ်တိ(Antioxidant)အာနိသငျရှိခွငျး အစရှိသဖွငျ့ လူ့ခန်ဓာကိုယျအတှကျမြားစှာအထောကျအကူပေးသော ဗီတာမငျတဈမြိုးပဲဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကွီးရဲ့ မရှိမဖွဈဆေးမြားစာရငျးတှငျပါဝငျပွီး ဈေးမကွီးပဲအလှယျတကူဝယျယူရရှိနိုငျပွီး လူတှအေတှကျအကြိုးပွုတဲ့ အာဟာရဓါတျတဈမြိုးပဲဖွဈပါတယျ။ ဗီတာမငျစီပေါကွှယျဝတဲ့ အစားအစာတှကေတော့ အခဉျြဓါတျမြားတဲ့အသီးမြား(လိမ်မျော၊စတျောဘယျရီ၊ကီဝီ၊မာလကာ၊ခရမျးခဉျြ စသညျ)နဲ့ ငရုတျပှ၊သဘောင်္သီး၊ပနျးဂျေါဖီစိမျး စတဲ့အပငျမှရတဲ့သဘာဝအစားအစာတှဖွေဈပါတယျ။ ဗီတာမငျစီရဲ့ကောငျးကြိုးတှကေို အတျောမြားမြားသိပွီးဖွဈပမေယျ့ လူသိနညျးနသေေးတဲ့အံ့သွဖှယျကောငျးကြိုးအခြို့ကို ဗဟုသုတအနနေဲ့ ထုတျနှုတျပွောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
သွခရြလောကျတဲ့ ဗီတာမငျစီရဲ့ အာနိသငျတှဟော ဘာတှလေဲ???
လူသိနညျး အံ့အားသငျ့ဖှယျ အာနိသငျလေးတှကေတော့ အောကျဖျောပွပါအတိုငျးပဲဖွဈပါတယျ…
၁။ဦးနှောကျရဲ့ မှတျဉာဏျစနဈတှငျ သကျရောကျမှုရှိခွငျး။
သိမွငျမှတျဉာဏျနဲ့သကျဆိုငျသောရောဂါမြား(Alzheimer’s disease,Dementia စသညျ)ခံစားနရေတဲ့လူနာမြားမှာ ဗီတာမငျစီဓါတျဟာရှိသငျ့တဲ့ပမာဏထကျလြော့နညျးနတောကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အဆိုပါရောဂါသညျမြားမှာ ဗီတာမငျစီအပွငျ အခွားသောအာဟာရဓါတျမြား(ဗီတာမငျ ဘီ၁၂၊ဗီတာမငျအီး နဲ့သံဓါတျ)ပါ လြော့နညျးမှုရှိနတောကို လလေ့ာတှရှေိ့ရပါတယျ။
၂၀၁၃ ခုနှဈမှာလုပျခဲ့တဲ့ လလေ့ာစိစဈခကျြတှအေရ ဗီတာမငျစီဟာ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးနဲ့ လဖွေတျလငေနျးရောဂါတှဖွေဈပှားမှုကိုလြော့ခပြေးတဲ့အာနိသငျရှိတယျဆိုတာ အတိအကသြကျသပွေပွောကွားလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဒုတိယထှကျရှိလာတဲ့စာတမျးမှာတော့ လဖွေတျလငေနျးရောဂါသညျတှမှော ဗီတာမငျစီဓါတျခြို့တဲ့ခွငျးပါတှဲယှကျနတောကိုတော့ တှရှေိ့ရပါတယျတဲ့။ ဗီတာမငျစီဟာ သှေးကွောအတှငျးဆုံးအလှာရဲ့ ကနျြးမာသနျစှမျးမှုနဲ့ လုပျငနျးဆောငျတာတှကေိုကောငျးမှနျစတောကွောငျ့ တဈရကျကိုဗီတာမငျစီ ၅၀၀ မီလီဂရမျအထကျသောကျသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ နှလုံးနဲ့လငေနျးရောဂါတှအေပျေါမှာ ထိရောကျမှုရှိနိုငျမယျလို့ ထငျရှားတဲ့သကျသမေပွနိုငျပမေယျ့လဲ ဆေးပညာရှငျအခြို့က ယုံကွညျနကွေပါတယျ။
အခြို့တှယေူဆကွ ကွားဖူးကွသလို ဗီတာမငျစီဟာကငျဆာကို သကျသာ/ပြောကျကငျး/ဖွဈပှားမှုနှုနျးလြော့ကတြယျဆိုတာအတှကျတော့ အတညျပွုထားတဲ့စာတမျးတဈစုံတဈရာမတှရှေိ့ရသေးပါဘူး။ လူတဈခြို့ပွောသလို ကငျဆာကိုမနိုငျပမေယျ့လဲ ကငျဆာဆေးသှငျး၊ဓါတျကငျတာတှကွေောငျ့ဖွဈတဲ့နောကျဆကျတှဲပွဿနာတှကေို သကျသာပြောကျကငျးတယျဆိုတာလဲပဲ ယခုအခြိနျထိတော့ မှနျကနျကွောငျးသကျသမေပွနိုငျသေးပါဘူး။ သီအိုရီအရဆကျစပျတှေးတောလို့ရကောငျးရနိုငျပမေယျ့ လကျတှမှေ့ာတိကသြခြောတဲ့အထောကျအထားတဈစုံတဈရာမပွနိုငျသေးတာကွောငျ့ ဗီတာမငျစီဟာ ကငျဆာရောဂါမြားကို ကုသနိုငျ/သကျသာနိုငျ/ကာကှယျနိုငျတယျဆိုတာဟာလဲ မှနျကနျတယျလို့အတညျမပွုနိုငျသေးပဲ ကငျဆာရောဂါတဈခုခုခံစားရပါက ကငျဆာအထူးကုနှငျ့ပွသ၍ ကုသမှုခံယူရနျသာနံပါတျတဈအရေးအကွီးဆုံးဖွဈကွောငျးဖွညျ့စှကျပွောကွားလိုပါတယျ။
၄။ဗီတာမငျစီဟာ ရာသီတုပျကှေးအပျေါမှာ သကျရောကျမှုရှိခွငျး။
တုပျကှေးရောဂါကို ကာကှယျခွငျး၊ရောဂါပွငျးထနျမှုကိုလြော့နညျးစခွေငျး နဲ့ ရောဂါခံစားရမှုအခြိနျကာလကိုတိုစခွေငျးစတဲ့အပိုငျး(၃)ပိုငျးခှဲပွီး သုတသေနလုပျခဲ့ကွ/လုပျနကွေဆဲဖွဈပါတယျ။ အခြို့သုတသေနစာတမျးတှအေရ ဗီတာမငျစီဟာတုပျကှေးရောဂါကိုမကာကှယျနိုငျသျောလညျးပဲ ကိုယျခံစှမျးအားကိုမွငျ့တကျစခွေငျးကွောငျ့ ရောဂါပွငျးထနျမှုကိုလြော့ကစြခွေငျးနဲ့ နာလနျထမွနျခွငျးကိုတော့ အားပေးတယျဆိုပါတယျ။
၅။Scurvy ရောဂါကို ကုသနိုငျခွငျး။
ဗီတာမငျစီခြို့တဲ့ခွငျးဟာ Scurvy ဆိုတဲ့ရောဂါတဈမြိုးကိုဖွဈစပေါတယျ။ အခုခတျေမှာ လူတှရေဲ့အသိဉာဏျဗဟုသုတမွငျ့မားလာခွငျး၊ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုတိုးတကျလာခွငျးကွောငျ့ ထိုရောဂါဟာမတှရေ့သလောကျရှားပါးသှားပမေယျ့ လှနျလပွေီးသောခတျေမြားဆီက ဤရောဂါဖွငျ့အသကျသဆေုံးခဲ့ကွသူမနညျးပဲ လူတှကေိုခွောကျလှနျ့ခဲ့တဲ့ ရောဂါဆိုးကွီးဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ။ ရောဂါလက်ခဏာတှအေနနေဲ့ ပငျပနျးနှမျးနယျခွငျး၊အားအငျကုနျခမျးခွငျး၊မောပနျးခွငျး၊အရိုးမြားကိုကျခဲခွငျး၊အနာကကျြရနျကွာခွငျး၊သှားဖုံးသှေးယိုခွငျးစတာတှအေပွငျ ဖြားခွငျး၊တကျခွငျးသာမက အသကျသဆေုံးခွငျးအထိပါဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
၎င်းငျးရောဂါဖွဈပါက ဗီတာမငျစီ စားဆေး/ထိုးဆေးမြားဖွငျ့ ကုသပြောကျကငျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီလောကျဆို လူသိနညျးသေးတဲ့ဗီတာမငျစီရဲ့ သွခရြဖှယျအကြိုးကြေးဇူးအခြို့ကို ဗဟုသုတအနနေဲ့သိလောကျပွီထငျပါတယျ။
အားလုံးပဲ ကနျြးမာခမျြးသာကွပါစကွေောငျး ဆုမှနျတောငျးလကျြ။
သြချရလောက်သော ဗီတာမင်စီရဲ့ အာနိသင်များ
ဗီတာမင်စီဆိုတာ လူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ဗီတာမင်စီကိုမထုတ်လုပ်နိုင်တာကြောင့် အစားအစာမှလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်စီကိုယူရပါတယ်။ ဗီတာမင်စီဟာ တစ်သှူးများကိုပြုပြင်ခြင်း၊အာရုံကြောထုတ်လွှတ်မှုစနစ်တွင်ပါဝင်ခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်အင်ဇိုင်းများရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်းအပြင် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်သတ္တိ(Antioxidant)အာနိသင်ရှိခြင်း အစရှိသဖြင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်များစွာအထောက်အကူပေးသော ဗီတာမင်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ မရှိမဖြစ်ဆေးများစာရင်းတွင်ပါဝင်ပြီး ဈေးမကြီးပဲအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး လူတွေအတွက်အကျိုးပြုတဲ့ အာဟာရဓါတ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီပေါကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကတော့ အချဉ်ဓါတ်များတဲ့အသီးများ(လိမ္မော်၊စတော်ဘယ်ရီ၊ကီဝီ၊မာလကာ၊ခရမ်းချဉ် စသည်)နဲ့ ငရုတ်ပွ၊သဘောင်္သီး၊ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း စတဲ့အပင်မှရတဲ့သဘာဝအစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကို အတော်များများသိပြီးဖြစ်ပေမယ့် လူသိနည်းနေသေးတဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းကျိုးအချို့ကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ထုတ်နှုတ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သြချရလောက်တဲ့ ဗီတာမင်စီရဲ့ အာနိသင်တွေဟာ ဘာတွေလဲ???
လူသိနည်း အံ့အားသင့်ဖွယ် အာနိသင်လေးတွေကတော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်…
၁။ဦးနှောက်ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်စနစ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိခြင်း။
သိမြင်မှတ်ဉာဏ်နဲ့သက်ဆိုင်သောရောဂါများ(Alzheimer’s disease,Dementia စသည်)ခံစားနေရတဲ့လူနာများမှာ ဗီတာမင်စီဓါတ်ဟာရှိသင့်တဲ့ပမာဏထက်လျော့နည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါရောဂါသည်များမှာ ဗီတာမင်စီအပြင် အခြားသောအာဟာရဓါတ်များ(ဗီတာမင် ဘီ၁၂၊ဗီတာမင်အီး နဲ့သံဓါတ်)ပါ လျော့နည်းမှုရှိနေတာကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာစိစစ်ချက်တွေအရ ဗီတာမင်စီဟာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနဲ့ လေဖြတ်လေငန်းရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုကိုလျော့ချပေးတဲ့အာနိသင်ရှိတယ်ဆိုတာ အတိအကျသက်သေပြပြောကြားလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒုတိယထွက်ရှိလာတဲ့စာတမ်းမှာတော့ လေဖြတ်လေငန်းရောဂါသည်တွေမှာ ဗီတာမင်စီဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်းပါတွဲယှက်နေတာကိုတော့ တွေ့ရှိရပါတယ်တဲ့။ ဗီတာမင်စီဟာ သွေးကြောအတွင်းဆုံးအလွှာရဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကောင်းမွန်စေတာကြောင့် တစ်ရက်ကိုဗီတာမင်စီ ၅၀၀ မီလီဂရမ်အထက်သောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့် နှလုံးနဲ့လေငန်းရောဂါတွေအပေါ်မှာ ထိရောက်မှုရှိနိုင်မယ်လို့ ထင်ရှားတဲ့သက်သေမပြနိုင်ပေမယ့်လဲ ဆေးပညာရှင်အချို့က ယုံကြည်နေကြပါတယ်။
အချို့တွေယူဆကြ ကြားဖူးကြသလို ဗီတာမင်စီဟာကင်ဆာကို သက်သာ/ပျောက်ကင်း/ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းလျော့ကျတယ်ဆိုတာအတွက်တော့ အတည်ပြုထားတဲ့စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ရှိရသေးပါဘူး။ လူတစ်ချို့ပြောသလို ကင်ဆာကိုမနိုင်ပေမယ့်လဲ ကင်ဆာဆေးသွင်း၊ဓါတ်ကင်တာတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းတယ်ဆိုတာလဲပဲ ယခုအချိန်ထိတော့ မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေမပြနိုင်သေးပါဘူး။ သီအိုရီအရဆက်စပ်တွေးတောလို့ရကောင်းရနိုင်ပေမယ့် လက်တွေ့မှာတိကျသေချာတဲ့အထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာမပြနိုင်သေးတာကြောင့် ဗီတာမင်စီဟာ ကင်ဆာရောဂါများကို ကုသနိုင်/သက်သာနိုင်/ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာဟာလဲ မှန်ကန်တယ်လို့အတည်မပြုနိုင်သေးပဲ ကင်ဆာရောဂါတစ်ခုခုခံစားရပါက ကင်ဆာအထူးကုနှင့်ပြသ၍ ကုသမှုခံယူရန်သာနံပါတ်တစ်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းဖြည့်စွက်ပြောကြားလိုပါတယ်။
၄။ဗီတာမင်စီဟာ ရာသီတုပ်ကွေးအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိခြင်း။
တုပ်ကွေးရောဂါကို ကာကွယ်ခြင်း၊ရောဂါပြင်းထန်မှုကိုလျော့နည်းစေခြင်း နဲ့ ရောဂါခံစားရမှုအချိန်ကာလကိုတိုစေခြင်းစတဲ့အပိုင်း(၃)ပိုင်းခွဲပြီး သုတေသနလုပ်ခဲ့ကြ/လုပ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သုတေသနစာတမ်းတွေအရ ဗီတာမင်စီဟာတုပ်ကွေးရောဂါကိုမကာကွယ်နိုင်သော်လည်းပဲ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြင့်တက်စေခြင်းကြောင့် ရောဂါပြင်းထန်မှုကိုလျော့ကျစေခြင်းနဲ့ နာလန်ထမြန်ခြင်းကိုတော့ အားပေးတယ်ဆိုပါတယ်။
၅။Scurvy ရောဂါကို ကုသနိုင်ခြင်း။
ဗီတာမင်စီချို့တဲ့ခြင်းဟာ Scurvy ဆိုတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးကိုဖြစ်စေပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ဗဟုသုတမြင့်မားလာခြင်း၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတိုးတက်လာခြင်းကြောင့် ထိုရောဂါဟာမတွေ့ရသလောက်ရှားပါးသွားပေမယ့် လွန်လေပြီးသောခေတ်များဆီက ဤရောဂါဖြင့်အသက်သေဆုံးခဲ့ကြသူမနည်းပဲ လူတွေကိုခြောက်လှန့်ခဲ့တဲ့ ရောဂါဆိုးကြီးဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း၊မောပန်းခြင်း၊အရိုးများကိုက်ခဲခြင်း၊အနာကျက်ရန်ကြာခြင်း၊သွားဖုံးသွေးယိုခြင်းစတာတွေအပြင် ဖျားခြင်း၊တက်ခြင်းသာမက အသက်သေဆုံးခြင်းအထိပါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၎င်းရောဂါဖြစ်ပါက ဗီတာမင်စီ စားဆေး/ထိုးဆေးများဖြင့် ကုသပျောက်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို လူသိနည်းသေးတဲ့ဗီတာမင်စီရဲ့ သြချရဖွယ်အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကို ဗဟုသုတအနေနဲ့သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းလျက်။